Dhammaan caadooyinka Talyaaniga oo ay tahay inaad ogaato | Wararka Safarka
Luis Martinez | 24/09/2021 15:00 | dhaqanka, Italia
ka caadooyinka Talyaaniga Waxay yihiin kuwa waddan leh xididdada Greco-Latin, isla kuwa qaabeeyey caadooyinka Isbaanishka qarniyo badan. Sidaa darteed, aad ugama duwan yihiin kuweenna, ugu yaraan marka la eego kan ugu muhiimsan iyo abtirsiinta.
Si kastaba ha noqotee, in kasta oo aan hadda kuu sheegnay, caadooyinka Talyaanigu waxay soo bandhigaan astaamo u gaar ah oo ka soocaya kuwa caadada u ah ummadaha kale ee dhaqankoodu sidoo kale leeyahay Substrate Laatiin ah. Wax ay qabtaan ma jiraan, tusaale ahaan, caadooyinka gaastronomiska ee Faransiiska (halkan ayaan kaaga tagaynaa maqaal iyaga ku saabsan) ama Boortaqiis oo wata kuwa ku -meel -gaarka ah. Sidaa darteed, waxaan kuu sheegi doonnaa qaar ka mid ah caadooyinka Talyaaniga ee gaarka ah.
1 Laga soo bilaabo muujinta ilaa dhaqanka diinta
1.1 Muujinta, dhab ahaantii Talyaani
1.2 Cuntada, caado ka mid ah caadooyinka Talyaaniga
1.3 Diin -ahaaneed, oo u dhashey Talyaaniga
1.4 Wadista baabuurka, arrin taagan
1.5 Dharka, ku noqo moodada
1.6 Opera, caado Talyaani dhab ah
1.7 Dibad -bax, oo ka soo jeeda dabeecadda Talyaaniga
1.8 Tibaaxaha iyo weedhaha
Laga soo bilaabo muujinta ilaa dhaqanka diinta
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaan kaaga sheegno caadooyinka Talyaaniga ayaa ah inaan kaaga sheekeyno waddan sida dadka kaleba jamac u ah. Si la mid ah sida dhaqamadii Andalusiya uga duwanaayeen kuwa Galiciya, kuwa Sicilian -ku waxay u sameeyaan isla kuwa Piedmont. Si kastaba ha noqotee, sidoo kale sida dhammaan ummadaha, substrate -ka dhaqanka ee caadiga ah ayaa dhaliya caadooyinka ay wadaagaan dhammaan Talyaaniga. Aan aragno.
Muujinta, dhab ahaantii Talyaani
Muujinta, caadada Talyaaniga
Mid ka mid ah waxyaabaha kaa yaabin doona marka aad u safreyso Talyaaniga ayaa ah habka wada xiriirka dadka deggan. Laga soo bilaabo woqooyi ilaa kuwa ku nool koonfurta aadka u daran, aad bay u muujiyaan, ilaa heer, mararka qaarkood, ay u muuqdaan kuwo murmaya.
In kasta oo ay u muuqato mid halhays ah, haddana waa run, ma aha uun filim caadi ah. Talyaanigu waa is muujiyaa leh dhammaan xubnaha jirkaaga. Gacmahooda si xad dhaaf ah ayay u tilmaamaan, cod sare ayay ku hadlaan mararka qaarkoodna xitaa waxay la socdaan dhaqdhaqaaqyadooda dhaqdhaqaaqyo kale. Marka la soo gaabiyo, isgaarsiinta aan afka ahayn ee transalpinos waxay la mid tahay ama ka muhiimsan tahay ereyada.
Cuntada, caado ka mid ah caadooyinka Talyaaniga
Miis diyaar u ah inuu wax cuno
Waxaa jira caadooyin badan oo Talyaani ah oo la xiriira adduunka cuntada. Waa inay labadaba ku sameeyaan suxuunta ay dadka deggan ku raaxeystaan ​​iyo caadooyinka awoowayaasha oo ku siin kara nacayb haddii aadan aqoon. Waan kuu sheegi doonnaa iyaga.
Waa inaad ogaataa haddii aad ku booqato gurigiisa Talyaaniga, cuntada waa lama huraan. Wuxuu had iyo jeer ku siin doonaa wax aad cuntid oo cabtid. Wuxuu xitaa ku weydiin doonaa inaad la joogto qadada ama cashada. Waxaan kuu sheegi karnaa in cuntada ay tahay caado dhan Talyaani. In ka badan quudinta, iyaga waxay u tahay fal bulsheed.
Si aad uga qayb gasho cunto dalka gudihiisa, waa inaad ogaataa waxyaalo yar. Caadiyan, waxa ugu horreeya ee aad ku arki doontid miiska ayaa ah bilaabid. Magacan dhammaan noocyada bilowga ah waxaa loogu yeeraa, sida magacoodu tilmaamayo, oo aan waligood ka koobnayn baastada. Waxay noqon karaan sausages ama cuntada badda. Laakiin waxay u badan yihiin kuwa caadiga ah, tusaale ahaan, the caponata, fuudka Sicilian ee caadiga ah; ah fritatta, nooc ka mid ah omelette cufan; ah Afrikaan, farmaajo qallafsan oo caadi u ah Friuli, ama suppli Roman, taas oo ah croquette bariis ah.
Daawada antipasto ka dib, waxaa lagu siin doonaa koorsada koowaad kadibna labaad. Mid ka mid ah kuwan wuxuu noqon karaa spaghetti oo waligaa ha jarin ama qaaddo ha ku cunin. Dadka Talyaaniga ah waxay u tahay cibaado. Ugu dambayn, cuntadu waxay ku dhammaan doontaa il dolce. Si kastaba ha ahaatee, dhammaadka runta ah ayaa noqon doona kafeega, lama huraanka ah ee Talyaaniga iyo taas oo ay tahay inaad sidoo kale ogaato waxyaabaha qaarkood.
Wax aadan sameynin, gaar ahaan meelaha sida Tuscany, ayaa si fudud u dalbanaya qaxwe. Waxay kuu eegi doonaan sidii shisheeye. Weydiiso a expresso machiatto ama gooyo, mid gawaarida ama kafeega oo gaaban ama labanlaab ama double. Si kastaba ha ahaatee, ka badan caadiga ah waa cappuccino, kaas oo leh qaybo kafeega, caano kulul iyo xumbo caano.
Ugu dambayntii, qaybtan dheer ee loogu talagalay cuntada Talyaaniga, waxaan kuu sheegi doonnaa in, transalpine -ka, hooyadiis iyo ayeeyadiis ay yihiin kuwa cunto kariye ee ugu fiican adduunka. Iyaga, the Mamma iyo aan ahayn si fiican ayay wax u karsadaan oo cid kale ha weydiin. Waxba maaha, Talyaani reerkiisu waa muqadas.
Diin -ahaaneed, oo u dhashey Talyaaniga
Dhacdo katoolik ah
Tilmaamo kale oo ka mid ah transalpinos waa diintooda qoto dheer. In kasta oo xaqiiqda ah, marka loo eego tirakoobyada, kaliya 30% dadka Talyaanigu waxay qirtaan inay yihiin kaatoolig ku dhaqma, dhaqanka diintu aad buu muhiim ugu yahay waana lagama maarmaan inaad ixtiraamto. Dhab ahaantii, waxaa muhiim ah in, halkii, ku dhawaad ​​90% dadku waxay isku sheegaan inay yihiin rumayste.
Maaha wax kadis ah in Talyaaniga the Vatican (halkan ayaan kaaga tagaynaa maqaal ku saabsan dalkan), fadhiga diinta Kaatooligga. Sidaa darteed, dalka transalpine waxaa jira aroosyo diimeedyo badan iyo baabtiisyo, iyo sidoo kale xaflado kale sida xaflado iyo socod si loogu maamuuso quduusiinta. Sidoo kale, sida wax kasta oo ay sameeyaan, Talyaani waxay si xamaasad leh ugu nool yihiin xamaasaddooda diimeed.
Wadista baabuurka, arrin taagan
Baabuur wadista Rome
Waxa aan kuu sheegi doonno waxay u ekaan karaan hal -ku -dheg iyo, weliba, guud ahaan. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad rumaysato waxay badbaadin kartaa noloshaada. Sababtoo ah guud ahaan marka la hadlayo, Talyaanigu waa darawalo aad u xun. Ama, waxaa fiican in la yiraahdo, aad u ixtiraam leh xeerarka waddooyinka.
Magaalooyinka waaweyn ee dalka, baabuurtu waxay ka boodaan nalalka gaduudan, si xad dhaaf ah ayay u gaadhaan oo mid walba meeshii uu doono ayuu ku wareegaa. Jidadku waxay u eg yihiin wareegyada tartanka dhabta ah. Laakiin waxa ugu sarreeya, ha ka tallaabin isgoyska marinka adoo rumaysan in baabuurtu istaagayaan. Marna ma sameeyaan.
Dharka, ku noqo moodada
Aqoonsiga Talyaaniga ee moodada ayaa caan noqday. Waa run in qaar ka mid ah nashqadeeyayaashii waaweynaa ay ahaayeen transalpine, laakiin aad muhiim ugu ma ahan dadka Talyaaniga caadiga ah inay u labistaan ​​si waafaqsan isbeddellada ugu dambeeyay.
Si kastaba ha ahaatee, waa run in, guud ahaan marka la hadlayo, waxay aad uga walaacsan yihiin muuqaalkooda. Ma arki doontid iyaga oo dhar -beel ah xitaa dukaan weyn ama jimicsiga. Aad bay uga taxaddaraan joogitaan qurux badan (muuqaal wanaagsan) tanna waxaa ka mid ah, ma aha oo kaliya dharka, laakiin sidoo kale timaha iyo qalabka.
Opera, caado Talyaani dhab ah
Matalaadda 'Aída' ee Verdi
Guud ahaan marka laga hadlayo, Talyaanigu waa jecel muusikada weyn. Iyo, dhammaan noocyada muusikada, opera ayaa soo jiita iyaga. Maaha wax iska yimid, maadaama noocani ka kooban yahay wuxuu ku dhashay waddanka transalpine.
Abuuritaankii ugu horreeyay ee loo tixgelin karo opera wuxuu ahaa Dafne, ee Jacopo Peri, yaa qoray 1537. Si kastaba ha ahaatee, waxay noqon doontaa qarnigii XNUMX -aad markii nooca uu gaaray heer sare oo caan ah qorayaasha sida Gioachino rossini, Francesco Bellini iyo, dhammaan, Giuseppe Verdi.
Tan dambe ayaa mas'uul ka ah faafinta opera. Talyaanigu waxay shaqooyinkoodii u rogeen astaanta midnimada dalka iyo iyada, waxay noqdeen kuwo aad loo jecel yahay. Tan iyo markaas, waxay u ahayd xamaasad Talyaani oo kaliya u dhigma midka ay dareemaan kubadda cagta, mid kale oo ka mid ah caadooyinka waaweyn ee Talyaaniga, inkasta oo ay tani caadi u tahay dalal kale oo badan.
Dibad -bax, oo ka soo jeeda dabeecadda Talyaaniga
Mudaaharaad ka dhacay waddada
Arrin kale oo kaa yaabin doonta haddii aad u safarto Talyaaniga ayaa ah in dadka deggan ay waqtigooda ku bixiyaan mudaaharaad ku saabsan wax walba. Wax sidoo kale lagu xoojinayo dabeecaddiisa qiirada leh. Macno malahan haddii ay tahay sababta oo ah gaadiidkii dadweynaha ee ay sugayeen inuu soo daahay, maxaa yeelay Dowladda ayaa ka xaday ama, si sax ah, sababta oo ah kooxdooda kubbadda cagta ayaa xun, transalpinos had iyo jeer waxay qabaan cabasho.
Hadana waxay aad u jecel yihiin mudaaharaadka sida masayr dhulkooda. Taas macnaheedu waa inaadan ka caban Talyaaniga. Haddii aad sidaas yeelatid, waxay noqon doonaan kuwa ugu waddanisan adduunka waxayna ka dhigi doonaan dhaqankaaga mid fool xun. Iyaga uun baa dhaliili kara dalkooda.
Tibaaxaha iyo weedhaha
Waxaan ku soo gabagabeyneynaa socdaalkan caadooyinka Talyaaniga annaga oo kaala hadalnay qaar ka mid ah tibaaxaha guud ahaan dalka oo dhan u dhigma weedhaha la dejiyay. In kasta oo ay ka tirsan yihiin luuqadda wadaagga ah, haddaad adeegsato, waxaad u ekaan doontaa Talyaani dhab ah.
Tusaale ahaan, ilaa quattr'occhi waxaa loola jeedaa afar indhood, laakiin waxaa loo adeegsadaa in la yiraahdo arrin waa in ay xalliyaan laba qof, iyada oo aan cid kale soo faragelin. Si aad u dirto qof aamusa, waxay dhahaan biyaha ku jira bocca. Dhankeeda, muujinta ligarsila ilaa dito wuxuu u tarjumayaa inuu ku xirayo farta, laakiin waxaa loola jeedaa in qofku xasuusto waxyeellada loo geystay si uu uga aarguto hadhow. Haddii la yidhaa cadere della padella alla brace waxay la macno tahay inaad digsiga ka soo dhacdo oo aad gasho dabka, laakiin waxay ka dhigan tahay inaad ka soo gudubtay xaalad xun una gudubtay mid ka sii xun. Waxay u ekaan doontaa inaan Guatemala u aadno "guatepeor." Ugu dambayn, haddii ay yidhaahdaan waa qof kaalay i soo sette peccati capitali Waxay tilmaamayaan inay u foolxun tahay sida toddobadii dembi ee dilaaga ahaa, inay u dhigmi lahayd sankeenna foosha xun.
Gabagabadii, waxaan ku tusnay qaar ka mid ah kuwa ugu muhiimsan caadooyinka Talyaaniga. Caqli ahaan, ma iloobi kartid in uu yahay dal dhan oo leh dhaqammo gobol oo kala duwan, laakiin dhammaan kuwa aan soo sheegnay waxaad ka heli kartaa woqooyi ilaa koonfur iyo bari ilaa galbeed. Waxaana wali ka tagnay caadooyin kale sida caadadii soo bandhigo qof haysta shahaadada jaamacadda ee ay hayaan (tusaale ahaan, qareenka Buscetti) ama jaceylka uu u qabo macmiilka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » Getaways Yurub » Italia » Caadooyinka Talyaaniga